Izinsimbi Zocingo: izinto zocingo eziyinhloko zocingo olumnyama oluxhunywe ngocingo lwensimbi noma ucingo lwensimbi yensimbi.
IBlack Annealed Wire isatshalaliswa kwezokwakha nakwezolimo. Ngakho-ke, ekwakhiweni komphakathi ucingo oluxhunywe, olwaziwa nangokuthi 'ucingo olushisiwe' lusetshenziselwa ukubeka insimbi. Kwezolimo ucingo olusetshenzisiwe lusetshenziselwa ukufulela ibheyili.
Okwamanje ucingo olunamathiselwe olumnyama lusetshenziswa kabanzi njengocingo noma uthayela wokulinganisa esakhiweni, emapaki nasekuhlanganiseni nsuku zonke.
Ucingo olumnyama oluxhunywe ikakhulu lucutshungulwa lube yi-coil wire, i-spool wire, i-big package ye-wire noma iqhubeke iqondiswa futhi isike yaba yicingo lokusika no-U type wire
Into Ucingo oluthanjisiwe olumnyama Umkhiqizo Ukukhanya kwe-Gemlight noma i-OEM / ODM
Insimbi Ibanga Q195 Q235 Carbon steel noma SAE1006 / 1008 I-Wire Tepe Round
Uhlobo lashukumisa Ucingo oluthanjisiwe olumnyama Ububanzi 0.3-6.0mm BWG8 # kuya ku-36 # / Gauge # 6 kuye ku- # 24
Isilinganiso Sokunwebeka 10% -25% Icubungula Isevisi Ukugoba, Welding, isibhakela, uyalulama, Ukuzisika
Isisindo sekhoyili 2kg, 3kg, 10kg 25kg / ikhoyili noma njengoba kuceliwe Izinga Camera Camera 8g-28g / m2
Amandla eqine 350-550N / mm2 Ukwelashwa Umdwebo wocingo
Ingxubevange noma cha Akunjalo Ukubekezelelana ± 3%
Ucingo olunamathiselwe olumnyama lenzelwe ukuvimbela ukugqwala nesiliva elicwebezelayo ngombala. Iqinile, ihlala isikhathi eside futhi isebenza ngezindlela eziningi ngokweqile; isetshenziswa kabanzi ngabenzi bezindawo, abenzi bemisebenzi yezandla, ukwakha nokwakha, abakhiqizi bebhebhoni, ubucwebe nosonkontileka. Ukuphikisana nokugqwala kukwenza kube lusizo olukhulu ezungeze indawo yokugcina impahla, kanye negceke elingasemuva, njll.
Intambo yensimbi yokusika yamahhala, Ukwakhiwa, Umsebenzi wohlaka lwezolimo, Izicingo, iMeshes, nokusetshenziswa okuhle
Ifilimu yePulasitiki isongwe ngaphakathi, indwangu kaHassian noma isikhwama eselukiwe esisongwe ngaphandle.
I-Retail Pack iyatholakala
Ayikwazi Phama njengoba ngezifiso
Langaphambilini Ucingo lwe-Eletro Lashukumisa
Olandelayo: Hot bacwilisa wire lashukumisa
IBlade Iron Wire
Ipulazi Noma Ucingo Lwezinkomo